I-T3 design & chic + indawo yokupaka evikelekile
Ingabe ufuna indawo yokuhlala evuselelwe, efakwe izinto futhi ehlanzeke ngendlela exakile?
Siyajabula ukukwamukela kuleli fulethi elimnandi elinamagumbi amathathu nakho konke ukunethezeka okudingekayo empilweni yakho. I-plus enkulu! : inendawo yokupaka yangasese nevikelekile kanye nokufinyelela ngokushesha kuzo zonke izinsiza, izitolo kanye nezithuthi zomphakathi (ibhasi le-chrono elingaphansi kwesakhiwo lisebenzela esiteshini sesitimela saseNantes ngokuqondile).
UJulie kanye no Tof
Indawo yethu yokuhlala isilungiswe ngokuphelele. Ikhanya kakhulu, inakekelwe ngokuphelele futhi inikeza izinzuzo zokuba:
- Igumbi lokulala elinokuthula elibheke egcekeni, elibhekene neParc de la Gaudinière.
- Esitezi esiphansi sendlu encane yokuhlala.
- Ifakwe ngokugcwele futhi ihlonyiswe.
Intengo iyafana, kungakhathaliseki ukuthi ungabantu abangu-2 noma abangu-6 (ibhentshi elengeziwe egumbini lokuphumula).
Ifanele ngokuphelele izidingo zokuhlala komndeni.
I-inthanethi/WiFi + box 250 iziteshi onazo.
Ilineni lasendlini (imibhede + izindlu zangasese) inikezwa futhi igcinwe ngemikhiqizo yemvelo.
Izitolo (ikhemisi, indawo yokubhaka) ngaphansi kwesakhiwo.
Isuphamakethe imizuzu emi-5 ngemoto.
Indawo yokupaka yenziwe yatholakala kuwena ngakho ifakiwe emalini yendawo yokuhlala.
Umshini wokuwasha izitsha kanye nomshini wokuwasha kuhambisana nokuhlala kwakho.
Kulala abantu abangu-2 (140x190) ntofontofo.
Ukufinyelela okuqondile phansi,
Ukusondela kwezindawo eziluhlaza ezipholile kanye nemidlalo yazo yezingane.
4.38 ·56 okushiwo abanye
4.38 out of 5 stars from 56 reviews
4.38 · 56 okushiwo abanye
Indawo engaphithizeli ebusuku, enye yezindawo eziluhlaza kakhulu eNantes! Umfula, i-Cens, ugeleza phansi kwefulethi. Ithuba lokuhamba okuhle noma ukugibela ibhayisikili ukuze ufinyelele enkabeni yedolobha eduze kwamanzi.
Ifulethi liseduze nazo zonke izinsiza futhi libhekene neParc de la Gaudinière, enye yezindawo ezinhle kakhulu eNantes.
Izitolo ezingomakhelwane zizokusebenzela kahle:
Ikhemisi, ibhula, ibhikawozi ngaphansi kwesakhiwo.
I-Route de Vannes nezitolo zayo eziqhele ngamamitha angama-500
Siyakwamukela ngokusebenzisa i-concierge fair "BNB FACILE". Ngakho-ke u-Grégoire ungumkhulumeli wakho onelungelo. Uhlela nawe ukunikezwa kokhiye nokungena endaweni yokulala phakathi kuka-4:00 p.m. no-8:00 p.m. (okungenzeka kuze kube phakathi kwamabili).
Ukuhamba kumahhala ekuseni, ngaphambi kuka-11:00 a.m.
UGrégoire angathintwa ukuze aphendule imibuzo yakho ngesikhathi uhlala ku-06 95 55 71 70.
Siyakwamukela ngokusebenzisa i-concierge fair "BNB FACILE". Ngakho-ke u-Grégoire ungumkhulumeli wakho onelungelo. Uhlela nawe ukunikezwa kokhiye nokungena endaweni yokulala phakath…